Argaggixisada - Sabahionline.com
Unugyada al-Shabaab ee la burburiyay oo muujiyay sida ay kooxdu u shaqeeyso
2014-12-26 Hay'adaha amniga ee Soomaaliya waa inay feejignaan dheeraad ah la yimaadaan oo ay u adeegsadaan macluumaadka laga helay unugyada al-Shabaab ee la burburiyay inay sameeyaan nidaam lagu kormeero guryaha iyo dhismeyaasha la kireeyo, ayay sheegayaan falanqeeyayaashu.
2014-12-25 Kooxdan argagixisada ah ayaa sheegaysa in ay xoolo badan oo lagu qiyaasay $9 milyan oo doolar ay xoolalayda daggan meelaha ay gacanta ku hayaan ka uruuriyeen, iyaga oo sheeganaya in ay siinayana dadka baahan --sheegashadaas oo ay beeniyeen dadka deegaanka.
Hoggaamiyeyaasha iyo shacabka Mandera oo ku dhaartay inay xagjirsiinta wax ka qabtaan ka dib weerarradii al-Shabaab
2014-12-18 Shacabka, hoggaamiyeyaasha diimeed, mas'uuliyiinta, xildhibaannada iyo mas'uuliyiinta ammaanka ee Gobolka Mandera ayaa ka wada shaqeeynaya inay bulshadooda ka ilaaliyaan falal argagixisanimo ee mustaqbalka dhaca.
Mas'uuliyiinta Tiyegloow oo ku dhaartay inay sharciga ugu aari doonaan dilalkii haweenka
2014-12-17 Mas'uuliyiinta deegaanka ayaa sheegaya inay tahay in colaadahan soo laalaabanaya la soo afjaro ka dib markii al-Shabaab ay madaxa kaga jartay Tiyegloow laba haween ah oo ay askartuna ka qeyb qaateen weerar aarsi oo aysan amar u haysan.
Shacabka Galhareere oo taxaddar ku jira xilli dagaalyahaniinta al-Shabaab sii kordhiyeen cadaadiska
2014-12-09 Dagaal yahaniinta al-Shabaab isku dayaya in ay xoojiyaan gacan ku hayntooda shacabka, iyada oo xukuumadduna ay baadhayso kutiri ku teeno sheegaya in hogaamiyaha al-Shabaab Axmed Cumar uu magaalada ku dhuumanayo.
2014-12-02 Iyada oo in ka badan 60 qof ku dhimatay Mombasa wax ka yar laba todobaad, ayuu Madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu ku dhawaaqay isbaddal baaxad weyn oo uu ku sameeyay madaxda sare ee ammaanka dalka.
Soomaalida oo aan hubin sida ay u soo sheegayaan ficillada al-Shabaab una doonan lahaayeen abaal-marinta lacageed
2014-12-01 Shacabka ayaa sheegaya in xukuumadda looga baahanyahay inay la timaaddo dadaal dheeraad ah oo ku aaddan inay dadka ku dhiirriyaan sidii ay u soo sheegi lahaayeen xogta ku saabsan al-Shabaab isla markaana sharraxaad ka bixinaya nidaamka lagu bixinayo abaalmarinta.
Dadka miyiga oo ku dhaartay inay tuulooyinkooda la soo noqonayaan ka dib markay dab ku qabatay al-Shabaab
2014-11-28 Ka dib markii shacabka tuulooyinka Xamiirgaab iyo Qabadaro ay diideen inay xoolo siiyaan al-Shabaab, ayay xagjiriintu la soo noqdeen gurmad oo gubeen guryihii tuulaaleeyda.
2014-11-24 Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay laysay 28 qof oo aan Muslimiin aheeyn oo la socday bas taa oo looga aargudanayo weerarradii lagu galay masaajidda Mombasa toddobaadkii hore, xilli ay dadka deegaanka iyo hoggaamiyayaasha diintu ay codsanayaan in lagu dadaalo nabad ku wada noolashaha.
Ciidamada Soomaaliya oo fashiliyay qorshayaashii al-Shabaab ee Muqdisho
2014-11-21 Hawlgallo afar iyo labaatanka saac ah oo laga fulinayo caasimadda Soomaaliya ayaa lagu soo qabtay daraasiin hawlwadeennada al-Shabaab ah loogana hortagay ugu yaraan 20 weerar bishan, siday sheegayaan mas'uuliyiinta amniga.
Mombasa oo xiisad ka kacsan tahay iyo baadhitaanno socda ka dib weerarradii masaajidyada
2014-11-20 Bilayska ayaa weeraray afar masaajid oo ku yaala Mombasa oo la sheegay inay xidhidh la leeyihiin al-Shabaab iyadoo isla usbuuca ay dhaceen rabshado waxyeello geeystay dareenno kala duwanna ay muujiyeen hoggaamiyeyaasha iyo shacabka maxalliga ah.
Al-Shabaab oo afduubtay dad degaan ah laba dumar ahna ku biraysay Kuudhaa
2014-11-13 Dadka degaanka jasiiradda Kudhaa ayaa sheegaya in ay u baqayaan ammaanka dad rayid ah oo ka badan 20 qof oo ay al-Shabaab afduubtay markii ay xagjiriintu muddo kooban la wareegeen gacan ku haynta jasiirada.
Shacabka reer Muqdisho oo ka baroordiiqaya dilka macalimiintii xannaanada caruurta
2014-11-10 Madaxda maxalliga ah iyo muwaadiniinta ayaa ku eedeeyay al-Shabaab inay toogteen labo dumar ah oo jaamiciyiin ah oo waqtigooda u huray inay waxbaraan carruurta Soomaaliyeed, waxayna ku baaqayaan in si degdeg ah sharciga loo mariyo gacan-ku-dhiigleyaasha.
2014-10-31 Axmed Cumar ayaan tan iyo intii uu xukunka la wareegay bishii September si cad u soo saarin wax bayaan ah, taasoo falanqeeyayaasha qaar ay ku sheegayaan in ay tahay daciifnimo iyo isaga oo aan laheeyn awood hoggaamineed.
2014-10-28 Markii la adkeeyay ammaanka xarumaha dawladda, ayay al-Shabaab u ciirsatay qarxinta goobaha lagu qaxweeyo ee ay isugu yimaadaan rayidka, taas oo calaamad ah hoobadka wali ku socda kooxda, sida ay sheegayaan dadka reer Muqdisho.
Islaamku ma banneeynayo ciqaabta dilka ee riddada: Aqoonyahan Soomaaliyeed
2014-10-27 Si aan ugu guuleeysanno dagaalka lagu hayo xagjiriinta, "waa in aan bannaanka u soo saarnaa dabeecadda dhabta ah ee Islaamka oo ah nabad, dulqaad, dhex-dhexaadnimo iyo dimuqraadiyad," ayuu leeyahay qoraaga Soomaaliga ah Cabdisaciid Cabdi Ismaaciil.
Shacabka Baraawe oo soo dhoweeyay dhammaadka xukunkii dhibka badnaa ee al-Shabaab
2014-10-17 Ka dib markii ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ay xoreeyeen Baraawe, ayay shacabku sheegayaan inay cabsi la'aan u nool yihiin oo ay sameeyaan waxa ay doonaan, sida inay daawadaan telefishanka iyo in ay isticmaalaan taleefannada casriga ah.
Al-Shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda qaraxyadii makhaayadaha
2014-10-16 Afhayeen u hadlay al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyada laba qarax oo loo adeegsaday gaari kuwaa oo ka dhacay dibadda meelo laga qaxweeyo saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay, dilayna ugu yaraan 18 daraasiin kalena dhaawacay, wuxuuna ku hanjabay in ay soo socdaan weerarro dheeraad ah.
Qarax baabuur oo ka dhacay makhaayad Muqdisho ah ayaa argagax galiyay shacabka ka dib usbuucyo ay xasillooni jirtay
2014-10-13 Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in dhacdadan khasaaraha badan aysan meesha ka saareeyn xaqiiqada ah in amniga Muqdisho uu aad u hagaagay bilihii la soo dhaafay.
Al-Shabaab oo xoolaha ka dhacaysa shacabka Jubada Dhaxe ee abaartu ku dhufatay
2014-10-08 Dadka ku nool Jubbada Dhexe ayaa sheegay in al-Shabaab ay si khasab ah uga qaadayso xoolaha uga harry geelii, lo'dii iyo arigii, kadib markii inta badan ay u dhinteen xaaladaha abaarta daran ee ka taagan gobolka.
Soomaalida oo ugu baaqay dawladda iyo jaallayaasheeda in ay ka faa'iideeystaan daciifnimada al-Shabaab
2014-09-12 Shacabka ku nool daafaha Soomaaliya ayaa soo dhoweeyay dilka hoggaamiyihii al-Shabaab laakiin waxay yidhaahdeen waa in ay mas'uuliyiintu feejignaadaan oo ay cadaadiska ku wadaan kooxda.
Al-Shabaab oo boobtay ganacsiyada yaryar ka hor inta aysan ka cararin millatariga ku soo socda
2014-09-11 Xilli uu sii yaraanayo dhulka ay haystaan, uuna dhaqaalahoodu sii burburayo, ayay dagaalyahannada al-Shabaab door-bideen inay boobaan dukaamada raashinka iibiya.
Kenyanka oo soo dhaweeyay soo afjaridda "mihnaddii dilka" ee hoggaamiyihii al-Shabaab
2014-09-10 Ku dhawaad sannad kadib go'doomintii al-Shabaab ee suuqa Westgate, ayay dhibbanayaashii weerarka, saaxiibbadood iyo qoysaskoodiiba sheegayaan in dhimashada Axmed Cabdi Gadoone ay ka dhigan tahay ciqaabkii uu ku muteeystay argagixii uu soo agaasimi jiray.
Dhimashada hogaamiyaha oo al-Shabaab 'kala daadin' doonta
2014-09-08 In kasta oo kooxdan xagjirka ah ah ay durba magacaabeen qof badalaya, ayay haddana in badan ay qabaan in hogaamiyihii dhinaty uu ahaa koollada isku haysa kooxdan tafaraaruqsan.
Waalidiinta Soomaaliyeed oo guryahooda kala dagaallamaya fikradaha xagjirnimada ah
2014-09-01 Xilli ay xukuumaddu kordhisay xukunnada adag ee ay ku fulinayso xubnaha al-Shabaab, ayay waalidiinta Soomaaliyeed ka wacyigelinayaan carruurtooda khataraha xagjirnimada.
Culimada Soomaalida oo uga digay dhallinyarada qurba-joogta ah ku biiritaanka ISIL
2014-08-29 Culimada Soomaalida ayaa sheegay in dhibaatada ugu weyn ee haysata dhallinta Soomaalida ay tahay in ayan aqoon ku filan ka haysan waxa uu yahay Islaamku, taasoo ka dhigaysa in ay u nuglaadaan qorashada kooxaha xagjirka ah.
Xildhibaannada Soomaaliyeed oo iyagoo cabsi ku nool la harjadaya inay u adeegaan dalka
2014-08-05 Xilli ay sii badaneeyso cabsida laga qabo dilalka beegsiga ah, ayay xildhibaanadu sheegayaan inaysan joojinayn adeegga ay u hayaan shacabka waxayse ku eedeeyeen hay'adaha amniga Soomaaliyeed inaysan wax ku filan ka qaban ilaalintooda.
Weerarradii Lamu oo soo saaray dhibaatada dhaqaale ee haysta dambiileyaasha
2014-07-31 Haddi ay al-Shabaab dhab ahaantii mas'uul ka ahaayeen weerarradii iyo boobkii ka dhacay Gobolka Lamu, waxay kooxdu si ba'an ugu baahan yihiin lacag iyo alaabo asaasi ah, siday sheegayaan mas'uuliyiinta iyo falanqeeyayaasha amniga.
Dumarka Soomaaliyeed oo ah 'awood aan looga faa'iidaysan' dagaalka lagula jiro al-Shabaab
2014-07-29 Dumarka caasimadda Soomaaliya sidii loo baahnaa loogama faa'iidaysan marka la eego dagaalka lagula jiro argagixisada, laakiin wada-shaqeeyn dheeraad ah oo dhex maraysa hay'adaha amniga ayaa bilaabay inay miro dhalaan.
Soomaalida oo aad uga carooday dilka fannaanad, xildhibaanad Saado Cali Warsame
2014-07-24 Dilka Saado ayaa keenay in dib loogu fiirsado xaaladda amniga Muqdisho ee liidata, iyo sidoo kale damaca al-Shabaab ee ah inay laayaan dadka u ololeeya nabadda iyo rajada.
Al-Shabaab oo Baraawe si khasab ah carruurta uga qoraysa xarun lagu marin-habaabiyo
2014-07-17 Kooxda xagjirka ah ayaa sheeganaysa inay adeegyo bulsho u fidinayaan carruurta darbi-jiifka ah iyo dhallinyarada dayacan, laakiin shacabka ayaa sheegaya in carruurta laga qafaasho guryahooda iyo dugsiyadooda si maskaxda looga xado.
2014-07-09 Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hoggaamiyayaal cusub u magacaabay amniga, laakiin muwaadiniintu waxay su'aalo ka qabaan sida ay al-Shabaab awoodda ugu yeelatay in ay soo dhex-gasho dhismaha madaxtooyada markii labaad sannadkaan.
Caradii oo ka sii dartay xilli Kenyan kale lagu laayay weerarro ka dhacay Lamu iyo Tana River
2014-07-07 Kadib laba weerar oo kale oo lagu qaaday magaalooyin ku yaal gobolka xeebta, ayay dadku is waydiinayaan bal in xukuumadduba innaba leedahay rabitaankii iyo awooddii ay ku ilaalin laheeyd.
Cadaadiska oo ku batay saraakiisha sare ee ammaanka Kenya ka dib weerarro halis ah oo isdaba joogay
2014-06-23 Xildhibaannada iyo ururrada bulshada rayadka ayaa ku baaqaya in gabi ahaanba la baddalo madaxda sare ee amniga ka dib weerarradii lagu qaaday Gobolka Lamu oo ay ku dhinteen in ka badan 60 qof.
Sharciga oo si adag loo fuliyo ayaa furo u ah in Kenya laga dhammeeyo aafada been abuurka
2014-06-20 Badeecada been-abuurka ah ayaa dhaqaalaha ku dhibaatayn oo kaliya la baxisga canshuuraha, balse dawooyinka iyo bacrimiyeyaasha faalsada ah ayaa sidoo kale halis ku haya caafimaadka iyo cunnooyinka loo keeno Kenyanka.
Shacabka Qoryooley oo ka walaacsan xaaladda 20 ganacsade oo ay afduubeen al-Shabaab
2014-06-19 Al-Shabaab ayaa ganacsatada Qoryooley qafaalatay 14-kii June, waxayna shacabku sheegayaan inay ka walaacsan yihiin xaaladda saaxiibadood iyo qaraabadooda.
2014-06-17 Xukuumadda ayaa shabakadaha siyaasadda iyo burcadda mujrimiinta ah ku eedeeysay weerar laba maalmood socday oo ay ku dhinteen dad ka badan 60 qof, inkasta oo ay al-Shabaab sheegatay mas’uuliyadda weerarrada gaadmada ah.
Kenyanka oo dalbanaya in lawada xisaabtamo ka dib dilalkii baahsanaa ee al-Shabaab ka gaysatay Mpeketoni
2014-06-16 Xagjiriin al-Shabaab ah ayaa guryaha u tagay irid-irid, iyagoo dumarkii ku hor dilay nimankoodii, aabayaashood iyo walaalahood, sheegayna inay u yimaadeed inay ka tagaan dumar carmal ah iyo agoon oo kaliya.
Soomaalida oo cambaareeyay dilalka ay al-Shabaab fagaaraha ugu geesato "basaasiin"
2014-06-11 Al-Shabaab ayaa dishay toddobo ay ku sheegtay inay yihiin basaasiin afartii bilood ee la soo dhaafay ayada oo aan soo bandhigin wax ku caddeeynaya dambiyadaas ama siinin fursad ay isku difaacaan, taasoo ka soo horjeedda shareecada Islaamka.
Tartanka awoodda ee ka jiray masaajidka ayaa qeyb ka ah dilkii wadaadka ee ka dhacay Mombasa
2014-06-10 Mohamed Idris, oo ah imaam saameeyn lahaa oo si weyn hadalladiisu uga soo horjeedeen xagjirnimada, ayaa kaalin hoggaamineed kaga jiray dadaal loogu jiray in lagu kontoroolo farriimaha ka soo baxa masaajidyada Mombasa.
Soomaalida oo si taxaddar ku jiro u soo dhawaysay is-dhiibka hogaamiyihii sare ee al-Shabaab ee Atom
2014-06-09 Hogaamiyihii al-Shabaab ee Maleeyshiyaadka Buuraha Goolis Maxamed Saciid Atom ayaa isu dhiibay dawladda Soomaaliya, isaga oo dhalleeceeyay Axmed Cabdi Godane kuna tilmaamay ficillada al-Shabaab kuwo aan Islaami ahayn.
Shacabka Kismaayo oo u dabaal dagaya sii daynta 30 ganacsato qaad oo ay al-Shabaab qafaalatay
2014-06-06 Ciidamada Maamulka Ku-meelgaadhka Jubba iyo AMISOM ayaa si wadajir ah uga shaqeeyay in ay helaan ayna sii dayaan ragaas iyo haweenkaas kaliya hal saac kadib markii la qafaashay.
Soomaaliya oo ku dhawaaqday 'dagaal buuxa' inay ku qaadeeyso al-Shabaab weerarkii baarlamaanka ka dib
2014-05-26 Ra'iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay shacabka inay ciidamada ammaanka ka caawiyaan sidii al-Shabaab looga tirtiri lahaa waddanka iyadoo uu wasiirka amniga qarankuna iscasilay.
Jabuuti oo raadinaysa maskaxdii ka dambeeysay weerarkii ismiidaamiska ahaa ee Sabtidii
2014-05-26 Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku dhaartay "in uu tallaabo walba u qaadi doono sidii lagu soo qaban lahaa kuwii bixiyay amarkii weerarkii waxashnimada ahaa", kaas oo ay ku dhineen saddex qof ugu yaraan 14 qofna ay ku dhaawacmeen.
Dagaallada ka soo cusboonaaday Mandheera iyo Wajeer oo albaab u furaya weerarrada al-Shabaab
2014-05-21 Tan iyo markii ay dagaalladu ka soo dhex cusboonaadeen qabiillada Degoodi iyo Gare, ayay al-Shabaab waxay ka faa'idaysatay dareenka jeestay ee ciidanka ammaanka iyaga oo qaaday ugu yaraan 5 weerar.
Taageerada al-Shabaab siisay Boko Haram waxa uu ka tarjumayaa dhaqankii foosha xumaa ee ay kooxdu kula kici jirtay carruurta
2014-05-16 Al-Shabaab ayaa ku tilmaantay qafaalka ay kooxda Nigeria ku kaxeeysatay waxa ka badan 200 ee gabdhaha dugsileeyda ah "badbaado", iyada oo sheegtay in iibka gabdhaha ama in loo guuriyo mujaahidiinta ay tahay arrin bannaan.
Macalimiinta iyo shaqaalaha caafimaadka oo ka qaxaya degmooyinka ku yaala xuduudka Kenya iyaga oo ka baqaya weerarrada al-Shabaab
2014-05-15 Weerar lagu qaaday Gobalka Kenya oo ka dhan ahaa xero booliis ayaa cusboonaysiiyay cabsi ku timid macalimiinta iyo shaqaalaha caafimaadka, iyada oo dhalisay in ay qaxaan, arintaas oo saamaysay 800 oo arday iyo dad aan tiro lahayn oo shacab ah.
Dhimashada qaraxii Baydhabo oo kor u kacday iyo mas'uuliyiinta Soomaaliya iyo AMISOM oo bilaabay hawlo gargaar
2014-05-13 Xukuumadda Soomaaliya ayaa dirtay diyaarad lagu soo guro dadka uu gaadhay dhaawaca halista ah, halka ay shacabka Baydhabana wacad ku mareen in weerarku uu sii xoojinayo go'aankooda ah inay la dagaallamaan cadowga nabadda.
Culimo Soomaali ah oo hubka u qaadanaya siday ula dagaallami lahaayeen fikradaha iyo garaadka al-Shabaab
2014-05-09 Imaamyada ayaa ka garab dagaallamaya Xoogga Dalka Soomaaliyeed sidii loo dabar-gooyn lahaa al-Shabaab isla markaana dadwaynaha loogu diri lahaa farriin ah in sida ay kooxda xagjirka ahi u qalloocinayso diinta iyo aydiyoolajiyaddeeda argagixisannimo.
Madaxdii hore ee gobalka Banaadir oo baylah u ah aargoosiga al-Shabaab
2014-05-06 kadib markii ay naftooda khatar ku galiyeen in ay waddankooda u shaqeeyaan, ayaa guddoomiyayaashii hore ee degmooyinka ay sheegayaan in ay naftooda u cabsanayaan ayna naftooda ka ilaalin karin al-Shabaab oo ku dhaaratay in ay ciqaabayaan ayna dilayaan.
Qaraxyadii basaska ee Nairobi iyo Mombasa oo gilgilay kalsoonidii ay shacabku ku qabeen ciidamada ammaanka
2014-05-05 Fudaydka ka muuqda sida ay argagixisadu u weerarayaan goobaha ay beegsanayaan ayaa shacabka ka qaaday kalsoonidii ay ku qabeen awoodda ay ciidamada ammaanku u leeyihiin inay wajahaan amni-darrada sii badanaysa.
Colaadaha ka soo kordhay Muqdisho oo farriin baraarujin ah u diraya muwaadiniinta iyo ciidamada ammaanka
2014-05-01 Dadka deggan Muqdisho ayaa su'aalo ka qaba bal in ay xukuumaddu shaqadii loo baahnaa ka qabanayso xakamaynta khataraha ka imaanaya al-Shabaab, iyada oo sidoo kalena muwaadiniinta ugu baaqaya in ay kaalin tii hore ka firfircoon ka qaataan sugidda ammaanka.
Qabqabashada amni ee Kenya waxay meesha ka saaraysaa guulihii laga gaaray doodaha diimaha iyo isu-dul-qaadka
2014-04-29 Inkasta oo ay dhici karto in howlgallada ammaan ee xukuumaddu niyad-wanaag ku dhisan yihiin, haddana dadka falanqeeya ammaanka waxay leeyihiin qabqabashadu waxay isku khaldaysaa laba dhibaato -- argagixisannimada iyo hijrada -- kuwaas oo mid waliba u baahan yahay in lagu waajaho qaab isaga u gaar ah.
Weerarka Pangani waxa uu toosh ku ifinayaa tabaha bilayska Kenya
2014-04-24 Kadib markii laba askari oo bilays ah ay ku dhinteen qarax bam gaari oo ka dhacay dibedda Saldhiga Bilayska ee Pangani, ayay muwaadiniintu waxa ay su'aalo iska waydiinayaan sida uu u shaqeeyo bilaysku halka uu Isbatooraha Guud Janaraal Kimaiyo ku dhawaaqay in la kordhin doono dagaalka lagu hayo argagixisada.
Saameeynta dhimashada Makaburi ku yeelatay xagjirsiinta Kenya oo aan wali caddeeyn
2014-04-08 Iyada oo Makaburi loo aqoonsanaa in uu yahay 'ninka loogu hadal-haynta badan yahay' al-Shabaabta Kenya, ayay falanqeeyayaashu leeyihin duruufaha ku meeraysan dilkiisa ayaa laga yaabaa in ay marinka ka weeciyaan doodihii socday oo ay waliba kuwa qunyar-socodka ahaa u baddasho kuwo dagaal u joog ah.
Al-Shabaab oo dardar-galisay dadaalkeeda askaraynta ee tuulooyinka u dhaw Ceel Buur
2014-04-04 Kooxda xagjrika ah ayaa raadinaysa dad cusub oo ay askarayso si ay ugu soo biiraan dagaalka ay kula jiro askarta AMISOM iyo kuwa Soomaaliya kadib markii si xiriir ah looga qabsaday magaalooyin dhor ah olole millatari oo soo cusboonaaday.
Kenyanka oo aad uga carooday weerarka Eastleigh oo ugu baaqaya xukuumadda jawaab degdeg ah
2014-04-01 Kadib laba weerar oo ka dhacay xaafadda Eastleigh ee Nairobi, ayay Kenyanku waxa ay shaki ka muujinayaan in ciidamada ammaanka dalku ay leeyihin awooddii iyo dhiirranaantii ay ula tacaamuli lahaayeen qaddiyadda argagixisanimada.
Waalidiin reer Buulo Burde ah oo jawaabo ka doonayaa carruurtii ay afduubatay al-Shabaab
2014-03-28 Al-Shabaab ayaa dadka degaanka ku khayaantay in ay carruutooda qafaalato ka hor weerarkii millatari, iyada oo ay hadda waalidiintu leeyihiin maskaxda ayaa laga xaday si ay ugu dagaallamaan kooxda xagjirka ah.
Weerarkii badheedhka ahaa ee ay al-Shabaab ku qaadday Buulo Burde oo tijaabo u ah awoodda adkeeysi ee ciidamada huwanta
2014-03-19 Ciidamada Soomaaliya iyo AMISOM, iyaga oo garabsanaya shacabka dagan magaalooyinka dhawaanta la xoreeyay, ayay ka go'an tahay in ay al-Shabaab tirtiraan in kasta oo nolol iyo maal badanba ku kacayso.
Al-Shabaab oo Baraawe kula wareegaysa telefoonada gacanta ee kaamarada leh
2014-03-18 Shacabka Baraawe ayaa ugu baaqay AMISOM iyo Ciidamada Qaranka Soomaaliya in ay caawiyaan iyada oo al-Shabaab ay dadka ku amartay in ay telefoonadooda 'basaasnimada' ku soo wareejiyaan.
Godane oo u muujinaya in weerarka millatari ee AMISOM uu yahay dhul-qabsi
2014-03-14 Xilli uu dhul badan farihiisa ka sii baxayo, ayuu hoggaamiyaha al-Shabaab Axmed Cabdi Godane isku dayayaa in uu Soomaalida ku qanciyo in ciidamada gobolku ay damacsan yihiin inay waddanka kala qaybiyaan.
Shacabka Ceel Dheer oo cararay ka dib markay al-Shabaab ku soo rogtay canshuur aad u badan
2014-03-06 Dadka deegaanku waxay awoodi waayeen in ay bixiyaan lacagta $100,000 ee baada ah, waxaana ay in badan oo ka mid hadda yihiin baxsad iyaga oo isku dayaya inay ka dhuuntaan roondooyinka al-Shabaab.
Soomaalida oo dhaleecaysay isticmaalka al-Shabaab ee carruurta ismiidaamiya
2014-03-05 Weerarkii lagu qaaday Villa Soomaaliya ka dib, ayaa al-Shabaab soo daabacday sawirrada wiilal qoryo wata iyadoo cad in ay tahay isku day taageero loogu raadinayo kooxda, laakiin masawirrada ayaa waxay keeneen natiijo caksi ku ah sidii loogu talagalay.
Al-Shabaab oo ku guuldaraysatay in Soomaalida ay ka hor keento ciidamada Itoobiya
2014-02-24 Dadaalada shaqaalaysiinta ee al-Shabaab ee Buulo Burde, Ceel Buur iyo Galhareeri ayaa ku dhacay dhago xidhan, iyada oo shacab badan ay door bideen in ay cararaan intii ay ku biiri lahaayeen dagaalka al-Shabaab.
Weerarka al-Shabaab ku qaadday Villa Soomaaliya waa 'tallaabo quus ah oo ka imanaya xayawaan sii dhimanaya'
2014-02-21 Mas'uuliyiin ka socda dalwadda Soomaaliya iyo Qaramada Midoobay ayaa sheegay in uu fashilmay weerarkii ay kooxda xagjirka ahi ku soo qaadday xarunta madaxtooyada.
Maamulka Banaadir oo muwaadiniinta ugu baaqay in ay kaalintooda ka qaataan dagaalka lagula jiro al-Shabaab
2014-02-14 Duqa magaalada Muqdisho ayaa booqanaya degmo kasta oo ka tirsan caasimadda sifo uu muwaadiniinta uga wacyigaliyo mas'uuliyadda ka saaran soo qabashada xubnaha iyo taageerayaasha kooxda xagjirka ah.
Xukuumadda Soomaaliya oo lagu dhalleeceeyay sida ayan uga jawaabin xannibaadda Internetka ee al-Shabaab
2014-02-12 Kadib gooyntii internet-ka Muqdisho, ayaa dadka degaanka iyo hoggaamiyayaasha bulshada rayidka wax ay is waydiinayaan bal in xukuumaddu qorshaynayso in ay wax ka qabato xaaladda ka sii daraysa.
Hoggaamiyaha al-Shabaab oo baxsad ah ka dib markii labo goor dil lagu sigay
2014-02-07 Axmed Cabdi Godane ayaa la sheegay inuu ka dhuunto ilaaladiisa ammaanka isagoo ka shaki qaba daacadnimadooda, goor ay ciidamada Soomaalida iyo kuwa huwantu ku soo dhow yihiin hoggaamiyaha argaggixisada.
Internet la'aanta ay sababtay Al-Shabaab oo dadka nolosha ku qastay, Koonfurta Soomaaliyana ka abuurtay xanaaq badan
2014-02-04 Shacabka deggan meelaha ay xannibaaddu saameeysay ayaa sheegaya in xidhiidhka ay la sameeyn jireen ehelkooda oo markii hore ahaa mid fudud oo qiime jaban uu hadda noqday mid aad u adag oo lacagtiisuna aad u badan tahay.
Al-Shabaab oo xidhay xubno ka tirsan ka dib markii weerar daroon lagu qaaday Shabeellaha Hoose
2014-02-03 Dadka deegaanka Buulo Mareer iyo Sablaale ayaa sheegay in al-Shabaab ay fulisay baadhitaan albaab walba loo garaacay oo lagu raadinayay basaasiinta Maraykanka ka dib markii masuul sare ee kooxda argaggixisada ka tirsanaa lagu dilay weerar daroon.
Gole cuub oo codsanaya dadaal isku dubaridan si loola dagaallamo argagixisanimada Kenya
2014-01-28 Xadka aadka looga naxo ee dhalinyarada Kenya xagjiriin looga dhigayo, ayaa ku dhaliyay dawlada Kenya iyo madaxda diinta in la abuuro hannaan lagu hormarinayo xidhiidhka iyo wada shaqaynta.
Xukuumadda iyo muwaadiniinta Soomaaliya oo dhalleeceeyay isku dayga ay al-Shabaab ku mamnuucayso internetka
2014-01-15 Dadaalka al-Shabaab ay ku doonayso in ay ku joojiso Internet-ka waa isku day cad oo ay kooxda argagixisadu uga soo horjeeddo helidda macluumaadka, sida ay leeyihiin falanqeeyayaal iyo muwaadiniin.
Soomaalida qurba-joogta ah oo cambaareeysay hanjabaadaha al-Shabaab
2014-01-09 Iyadoo iskudayaysa inay argaggixiso Soomaalida soo noqonaysa, ayay al-Shabaab ka digtay inay beegsan doonto dadka ka soo noqonaya dibedda sababtoo ah waxay u shaqeeyaan "kufaarta".
Wadahadal iyo siminaarro diimeed ayaa muhiim ah si Kenya looga dhammeeyo marin habaabinta dhallinyarada
2014-01-06 Si loo xakameeyo marin habaabinta dhallinyarada iyo xagjirnimada ku soo badanaysa gobolka Xeebta, hoggaamiyeyaasha Mombasa ayaa ku baaqay in nidaam dhowr-geesood ah la isticmaalo si dhallinyarada loo afgarto.
Weerarkii al-Shabaab ee Sannadka Cusub oo gilgilay ciidanka ammaanka Soomaaliya
2014-01-02 Maalmo kadib markii ay al-Shabaab uga digtay muwaadiniinta in ay soo waddo weerar la hubo, oo ay mas'uuliyiinta xukuumadda Soomaaliya ku liideen kuna tilmaameen "wax lagu qoslo", ayaa laba baabuur oo bambaanaysan waxa ay weerareen mid ka mida hoteellada waaweeyn ee Muqdisho.
Shacabka Buule Burde oo ka cararaya xukunka naxariis darrada ah ee al-Shabaab
2013-12-26 Iyada oo cabudhinta maleeshiyaadka ee dhinaca dharka iyo waxyabaha wakhtiga firaaqada la qabto ay kooxdan u aragtay "in ay Islaamka ka soo horjeedaan" ayaa dhallinyaradu ay magaalooyinka ka tagayaan si ay uga fogaadaan dhibaatada socota ee kooxdan iyo garaacoodaba.
Shacabka Diinsoor oo diiday xarun idaacadeed cusub ay leedahay al-Shabaab
2013-12-18 Xarunta idaacada FM-ka cusub ayaa buunbuuninaysa fikradaha al-Shabaab shacabkana ka codsanaysa in ay jihaadka ka qayb qaataan.
Shacabka Ceel Buuur oo ka argagaxay dilka naxariis darada ah ee al-Shabaab ay u gaysatay oday dhaqameed
2013-12-10 Ololaha al-Shabaab ee ku bilawday in ay qafaashaan oday dhaqameedyada degmada Ceel Buur ayaa hadda isku badalay dil, kadib markii la helay maydka googo'ay ee oday dhaqameed aad loo ixtiraamo oo lagu soo tuuray goob bannaan.
Duqaydii ay al-Shabaab ka qafaalatay Ceel Buur oo meesha ay ku sugan yihiin aan la garabaynin
2013-11-27 Iyaga oo is qarinaya, gaajaysanna, ayaa al-Shabaab ay qafaasheen dhawr iyo tobaneeyo duqayda dhaqanka ah oo diiday in ay dadka aagaas dagan u sheegaan in xoolahooda siiyaan al-Shabaab.
Al-Shabaab: Tayaynta waxbarashada Soomaaliya waxa lagu weerarayaa Islaamka
2013-11-20 Kooxda xagjirka ah ayaa isku dayaysa in ay dadka reer Baraawe ka hor keento qorshaha waxbarashada qaranka, iyada oo ku andacooneeysa in ay dhibaato ku tahay diinta Islaamka.
Majallada cusub ee al-Shabaab oo si kale u dhigeeysa argaggixii Westgate, uguna hanjabeeysa Kenya weerarro dheeraad ah
2013-11-18 Iyadoo uu xasuuqii Westgate wali ku cusub yahay quluubta reer Kenya, ayey al-Shabaab isku dayeysaa inay qiil u sameeyso weerarka iyadoo ku raad-gadanaysa Islaamka iyada oo iska indho tiraysa arxan-darradii dhacdada.
Tansaaniya oo burburisay xero tababar oo lagu maan-baddalo caruurta oo ku taal gobolka Tanga
2013-11-15 Waxa la helay carruur Tansaaniyaan ah oo kuwa ugu da'yari ay yihiin afar jirro oo "gabi ahaanba maskaxda laga qabsaday" kuwaa oo dayriyay waalidkood isla markaana baranayay casharro ku saabsan "sida middida wax loogu dilo".
Al-Shabaab oo sheegaysa in telefoonnada gacanta casriga ah loo istcimaalay 'in lagu jaajuuso dadka Muslimiint ah'
2013-11-14 Kooxdan maleeshiyaadka ah ayaa dhibaysa dadka isticmaala telfoonada gacanata ee ku nool magaalooyinka ay gacanta ku hayaan ee ku yaala gobalka Shabeelada Hoose ee Soomaaliya, iyaga oo ugu goodiyay kuwa sii wada in ay sii isticmaalaan cawaaqib aad u xun.
Ololaha al-Shabaab ee dad qorashada oo dhago xidhan ku dhacaya
2013-11-12 Kooxdan xagjirka ah ayaa shacabka magaalooyinka ay gacanta ku hayaan ku khasbay in ay ka soo qayb galaan shirarka dad qorista, laakiin shacabka ayaan arrintaas dhag jalaq u siin in ay ku biiraan waxa lagu sheegayo jihaadka, iyaga oo isku daygaas ugu yeedhay mid 'lagu qosolo'.
Qarixii al-Shabaab ee hoteelka waxba uma dhimi doono horumarka: Madaxda Soomaaliya
2013-11-11 Madaxweynaha iyo ra'iisul-wasaaraha Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay weerarkii al-Shabaab ku qaadday hoteel Muqdisho ku yaal, iyaga oo ku dhaartay in la burburin doono xagjiriinta.
Al-Shabaab oo diinta Islaamka qiil uga dhigatay mamnuuca telefishanka ee Baraawe
2013-11-06 Ka dib markii ay millatariga Maraykanku weerar ku qaadeen Baraawe bishii hore, ayey al-Shabaab si nidaamsan u arbusheeysay dadka deegaanka, waxay haddana isku dayaysaa in ay ku hayso mugdi khabar la'aan ah.
Go'doominta al-Shabaab ee gobolka Baay oo khatar ku ah cunto helidda
2013-11-05 Dadka maxalliga ah ayaa sheegay cabsida ay ka qabaan in ay gaajo haleesho, iyada oo al-Shabaab ay xakamayn ku hayso isu socodka cuntada iyo alaabaha kale ee daruuriga ah ee tagaya Qansax Dheere iyo aaggaga kale ee gobolka Baay.
Al-Shabaab oo eriday oday dhaqameedyo si ay u qanciso kuwo daacad u ah
2013-10-31 Kadib markii odayaasha dhaqanka Soomaaliya ay diideen al-Shabaab oo ay taageereen xukuumadda federaalka, ayay kooxda xagjirka ah go'aansatey in ay ku baddasho hoggaamiyayaal ka da'yar oo ay si fudud u maareeyn karto.
Mas'uuliyiinta Soomaaliya oo soo dhaweeyay weerarka uu Maraykanku ku qaaday ninkii bamka u sameeyn jiray al-Shabaab
2013-10-29 Ninkii sameeyn jiray bamka la isku miidaamiyo "Anta Anta" ayaa waxa lagu dilay weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka oo lagu qaaday koonfurta Soomaaliya, kaasoo lagu sameeyey hawgal ay si aad u dhow isaga kaashadeen dawladda Maraykanka iyo tan Soomaaliyeed.
Khatarta al-Shabaab oo wali ku nagi daafaha Muqdisho
2013-10-25 Kooxdan xagjirka ah ayaa wali khatar ku ah degmooyinkii ay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Howlgalka Midawga Afrika Soomaaliya ay gacanta al-Shabaab ka xoreeyeen 2012-kii.
Al-Shabaab oo isku dayaysa in ay buunbuuniso weerarkii Beledweyne iyo muwaadiniinta oo aanan ka aqbalin
2013-10-21 Al-Shabaab ayaa sheegatay in khasaare dhimasho oo ballaaran ay ku markatay ciidamada gobolka oo xulufo la ah AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya, hase yeeshee mas'uuliyiin maxalli ah ayaa taas ku mance tiray in "al-Shabaab ay been sheegayso".
Al-Shabaab joogitaankeeda Mtwara oo walaac ammaan ka dhaliyay Tansaaniya
2013-10-17 Dawladda Tansaaniya waa inay awoodda al-Shabaab ee ay dhaqdhaqaaq tababar uga fulisay Mtwara u qaadataa halis aad u daran oo ku wajahan xasilloonida waddanka iyo gobolka, falanqeeyayaasha ammaanka ayaa ka digay.
Al-Shabaab oo kordhisay tabaheeda cabsi-galinta ee Baraawe wixii ka dambeeyay weerarkii Maraykanka
2013-10-15 Iyada oo uu socdo olole ay xagjiriintu ku dardar-galinayaan cabsi-galinta ay ku hayaan dadka deegaanka, ayaan la ogayn halka ay ku dambeeyeen dukaanlayaal badan kadib markii ay qafaasheen xagjiriinta al-Shabaab.
U kuurgalayaasha oo dhaleecaynaya gadoodka ka dhanka ah Soomaalida Kenya ku nool Westgate ka dib
2013-10-03 Kadib markii la soo sheegay qabqabsho ka dhacday Eastleigh, ayaa madaxda Muslimiinta iyo falanqeeyayaasha dhinaca ammaanka ay ka codsanayaan ciidanka Kenya in ay iska xakameeyaan u isticmaalka weerarkii argaggixisada marmarsiiyo ay ku dhibayaan dadka aan waxba galabsanin.
Dilalkii ay al-Shabaab ka fulisay Westgate waxa ay ka hor imaanayaan sunnihii Nabi Muxamad
2013-10-01 Rag hubaysan oo al-Shabaab ah ayaa carruur iyo dad dukaamaysanaya u laayay si aan kala sooc lahayn weerarkoodii ay ku tilmaameen jihaadka, laakiin ay culimada Muslimku ay sheegeen in weerarku uunan wax asal ah ku lahayn Islaamka.
Dadka reer Mahadaay oo qabsaday waddada dib u soo kabashada kadib saaritaankii al-Shabaab
2013-09-30 Muddadii labada sano ahayd ee ay al-Shabaab ka talineeysay degmada Mahadaay, ayay xagjiriintu waxa ay xireen dugsiyadii, waxay ganacsatada ku soo rogeen canshuur culus waxayna gabdhaha deegaanka ku khasbeen guur ayan raalli ka ahayn.
Weerarkii Westgate oo bannaanka u soo saaray goldaloolooyin ammaan oo aad u ballaaran
2013-09-27 Dadka wax naqdiya ayaa ku eedeeyay xukuumadda Kenya in ay hoos u dhigtay ilaaladii ammaanka oo ayan dhab ahaan u qaadan digniinaha loo soo gudbiyay toddobaadyadii ka horreeyay weerarka argaggixisannimo.
Hogaamiye al-Shabaab ah oo ku hanjabay dhiig badan oo qubta xilli dadkii Westgate ku dhintay la aasayo
2013-09-26 Madaxda ayaa balanqaadday in ciidmaada Kenya ee Soomaaliya jooga ay halkaas sii joogayaan si ay al-Shabaab ula dagaallamaan, waxay kale oo sheegayaan in hanjabaadahaas oo kale ay sii xoojinayaan go'aankooda ah in ay tirtiraan argagixisada.
Shabeellaha Hoose oo la dagaallamaya afduubka carruurta ee al-Shabaab
2013-09-26 Dawladda Hoose ayaa biloowday dadaal laba geesood ah, oo isugu jira waxbarasho lacag la'aan ah iyo wacyigalin waalid, si loogu babac-dhigo khasab ku askaraynta al-Shabaab ay ku hayso carruurta.
Zanzibar oo ammaanka xoojinaysa kadib weerarkii aashitada, qaraxna fashilisay
2013-09-25 Ciidamo booliis ah oo badan ayaa hadda waddooyinka Zanzibar waardiyaynaya, iyada oo baadhitaanka dambiyo shaqaaqooyin watay oo jasiirada ka dhacayna ay socdaan.
Jahwareer daba-dheeraaday kadib markii la wariyay in la soo afjaray mashaqadii Westgate
2013-09-24 Warar is khilaafsan oo ka soo baxaya xukuumadda Kenya iyo al-Shabaab ayaa wax adag ka dhigay in la ogaado “xaqiiqda” la rumaysan karo xilli uu afdubukii lagu hoobtay uu galay maalintii afaraad.
Maxbuus al-Shabaab ah oo wali baxsad ah iyo madixii xabsiga oo xiran
2013-09-24 Madixii Xabsiga Dhexe ee Muqdisho iyo lix kale oo ka tirsan askarta ciidanka asluubta ayaa lagu eedeeyay in ay qayb ka yihiin qorshe musuqmaasuq oo sababay baxsiga xubin ka tirsan al-Shabaab.
Xasuuqii suuqa Westgate oo ku guul-darreystay in uu wiiqo adkeysiga iyo midnimada Kenya
2013-09-23 Go'doomintii al-Shabaab ee suuq ku yaal Nairobi ayaa socota maalintii saddexaad, iyada oo culimo, siyaasiyiin iyo muwaadiniinba ay dhalleeceeyeen argagixisannimada waxayna wacad ku mareen in dhacdadani ayan ruxi doonin midnimada qaranka.
Al-Amriki oo hoggaamiyaha al-Shabaab ku weeraray farriimihiisii ugu dambeeyay ee uu la yeeshay caalamka
2013-09-20 Kali-talisnimada hoggaamiyaha sare ee kooxda ku xiran al-Qaacida Axmed Cabdi Godane ayaa si faahfaahsan bannaanka loogu soo saaray kalmidihiisii ugu dambeeyay ee xanafta lahaa ee uu soo saaray al-Amriki.
Maxay Soomaalida uga dhigantahay xarigga – ama sii daynta – Aweys
2013-09-18 Ka aamusnaanta xukuumadda Soomaaliya ee masiirka hoggaamiyihii hore ee al-Shabaab Xasan Daahir Aweys oo isa soo dhiibay bilo kahor, ayaa wiiqi kara dadaalada dib u heshiisiineed iyo gargaarka caalamiga ah.
Mukhaayadle Soomaali ah oo ballan qaaday in uu shaqada sii wadayo in kasta oo ay weerarro jiraan
2013-09-16 Axmed Jamaac ayaa sheegaya in uu wali Soomaaliya maalgashan doono kana shaqayn doono horumarinta nolosha waddanka iyada oo ay jirto in mukhaayaddiisa Muqdisho ku taala ay halbeegsi u tahay weerarrada al-Shabaab.
Culimada Soomaaliya oo cambaareeyay al-Shabaab, xagjirnimadana tallaabo cusub u qaaday
2013-09-13 Culimada diinta ee Soomaaliya ayaa soo saaray fatwo ay ku dhaleecaynayaan fikradda kooxdan xagjirka ah, soona saaray qodobo badan oo dawladda iyo shacabkuba ay xag jirnimada kula dagaalamayaan.
Puntland oo kordhisay dagaalkii ay al-Shabaab ugala jirtay Buuraha Goolis
2013-09-06 Maleeshiyada al-Shabaab la jaalka ah ee Buurta Goolis ayaa waayahan dambe weerarro intii hore ka yar ku qaadeysay Galgala iyo magaalooyinka kale ee aagga ah iyadoo ay dawladdu aad ula dagaallameyso argaggixisada.
Al-Amriki waa uu noolyahay, xiriirkiina waa uu u jaray al-Shabaab iyo al-Qaeda
2013-09-04 Bilo kadib markii la sheegay in la dilay, ayaa jihaadiga Maraykanka ah waxa uu sheegay in dhibaatada al-Shabaab ay salka ku hayso hoggaamiyaha al-Shabaab oo ka tallaabaya mabaadi'da Islaamka.
Kenya oo diyaar garawga kor u qaaday qorshe argaggixiso oo al-Shabaab ah dartiis
2013-08-27 Madaxda Mombasa ayaa sare u qaadey heerka ammaanka iyada oo ay warbixinno sirdoon ah sheegayaan in hawl-wadeennada al-Shabaab ay soo galeen magaalada xeebta ah iyaga oo indha-indheeynaya dhowr meelood oo weerar lala beegsan karo.
Soomaaliya oo ay dhibaato ka haysato sidii ay wax uga qaban lahaayeen khatarta miinooyinka iyo hubka aan wali qarxin
2013-08-08 Al-Shabaab ayaa ka baxday aag badan oo Soomaaliya ah oo la ciiraya miinooyin khatar ah, laakiinse dawladda ayaan haysanin khuburo arrintan ku xeel dheer si ay u soo bixiyaan.
Edward Mule Yesse oo xor ah ka dib 18 bilood oo uu gacanta al-Shabaab ku jiray
2013-08-02 Markii muwaadinka Kenya ee Edward Mule Yesse uu waddanka ku soo noqday Khamiistii (August 1-deedii), ayaa wuxuu wariyayaasha la wadaagay khibradihiisa ahaa la haystanimada. Sabahi ayaa kala hadashay aabaha Mule dhibkii halkaas ka soo gaadhay.
Mas'uuliyiinta Kenya oo baaraya xiriirka ka dhexeeya xagjiriinta Kenya iyo kuwa Tansaaniya
2013-08-01 Warbixin cusub oo ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa Sheekha Muslimka ah ee fadhigiisu yahay Mombasa Abubakar Shariif Axmed, oo sidoo kale loo yaqaano Makaburi, la xiriirisay kooxaha xagjirinta ah ee jooga Kenya iyo Tansaaniya.
Soomaalida oo la yaabtay weerarka al-Shabaab ay ku qaadday 'walaalaha Muslimiinta' Turkiga
2013-07-29 Hoggaamiyayaasha Soomaalida iyo muwaadiniintuba waxa ay rumaysan la'yihiin sababta ay kooxda xagjirka ahi u bartimlaameedsatay walaalaha Muslimiinta ah ee isku dayaya in ay Soomaaliya ka caawiyaan sidii ay lugaheeda ugu istaagi lahayd.
Al-Shabaab oo buun buuninaya rabshadaha Ramadaanka
2013-07-26 Kooxda xagjiriinta ah ayaa bixinaya faahfaahino ay calaamad su'aal saarantahay oo ku saabsan ololahooda colaad hurinta ah inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan marka Muslimiintu ay dalbanayaan nabad iyo cafis.
Garabka Amniyaadka al-Shabaab oo loo xil saaray difaaca Godane
2013-07-16 Iyada oo al-Shabaab ay sii daciifayso, ayay garabka kooxda ee Amniyaadka waxa ay joojiyeen fulinta dilalka qorshaysan iyo qaraxyada si ay hoggaamiye Axmed Cabdi Godane uga difaacaan cadowgiisa.
Dib u soo muuqashada jihaadiyiinta Kenya oo toosh ku ifinaya xaaladda xilligan ee al-Shabaab
2013-07-12 Axmad Iman Cali, oo ah hoggaamiyaha garabka ciidan qoridda al-Shabaab Kenya ee Xarunta Dhallinyarada Muslimka (Muslim Youth Centre), ayaa beeniyay in marnaba loo magacaabay 'amiirka sare ee Kenya' u qaabilsan kooxda xagjirka ah.
Al-Shabaab iyo xulafadooda oo isku waafaqsan in colaadda ay tahay waddada kaliya ee lagu heli karo awoodda
2013-07-08 Hadallo Twitter-ka lagu soo dhigay oo xiriir ahaa oo daba socday markii xafiiska laga qaaday madaxweynihii hore ee Masar, ayay xulafada al-Shabaab ee gobolka 'lacnadeen' hannaanka dowladeed ee dimuqraadiga.
Al-Shabaab oo ku dhaaratey inay awood ku meel-marsiin doonto hoggaansanaanta xilli khilaafku baahayo
2013-07-03 Ka dib dagaal aan noociisa horay loo arag oo Baraawe ku dhex maray kooxo is haya oo al-Shabaab ka tirsan, ayuu hoggaamiyaha sare Axmed Cabdi Godane ugu digay mucaaradkiisa inay ama addeecaan ama "si adag wax looga qaban doono".
Sharci Kenyaan ah oo xoojiyay ciqaabta kuwa argaggixisada maal-galiya
2013-07-01 Sharci Kenyaan ah oo la qorsheeynayo ayaa ku xukumi kara ganaax dhan 25 milyan oo shilin ($291,000 oo doolar) ganacatada la macaamisha argaggixisada.
Hoggaamiyaha al-Shabaab oo qalloocinaya caqiidada Islaamka si uu u dhaqan-galiyo addeecidda, marmarsiiyana u bixinaya dilalka
2013-06-28 Hadal isku dhex-yaacsan oo ka kooban17 bog, ayuu Axmed Cabdi Godane axaaddiith tirada ka batay iyo aayado Quraan ah u isticmaalay in uu ku joojiyo ka goosashada kooxda ee sii kordhaysa isla markaana uu marmarsiiyo ugu raadiyo dilka kuwa ka soo horjeeda.
Garabyada al-Shabaab oo iswajahaya kadib markii dagaal aan noociisa horey loo arag uu ka dhacay Baraawe
2013-06-25 Dagaalka ayaa waxaaa ku geeriyooday shan xagjiriinta kamid ah, waxaana ku dhaawacmay afar rayid ah, kaasoo cabsi kadhex abuuray rayidka, xilli kooxaha iska soo horjeeda ee al-Shabaab ay isku diyaarinayaan dagaallo kale.
Al-Shabaab oo caruurta ka qafaalanaysa badhtamaha Soomaaliya
2013-06-25 Kooxdan dagaal yahaniinta ah ayaa ka qafaashay boqolaal dhallinyaro ah magaalada Ceel Buur dhawaan, iyada oo shacabku ay ka cabsi qabaan in wiilashoodu ay maalin uun soo noqon doonaan iyaga oo jihaadka si fiican ula dhacsan.
2013-06-19 Kooxdan al-Qaeda la bahawday ayaa is miidaamiyayaal u dirtay xarun ay deggan yihiin Hay'adda Qaramada Midoobay ee Cuntada iyo Beeraha iyo Hay'ada Badbaadada Caruurta.
2013-06-04 Xubnaha al-Shabaab ayaa xirayay, gowracayay islamarkaana dhacayay dadka rayidka ah todobaadyadii la soo dhaafay, waxa ayna ka baxsadeen ciqaabta danbiyadaas ee shareecada Islaamka ku qoran.
2013-05-27 Sheekh Xasan Dahir Aweys ayaa ah hoggaamiyihii ugu dambeeyay oo al-Shabaab ka tirsan ee dharbaaxo u geeysta amiirka kooxda Axmed Cabdi Godane.
2013-05-24 Hoggaamiyaha sare ee al-Shabaab Axmed Cabdi Godane ayaa isku dayayaya in uu iska duwo dhalleeceynta joogtada ah ee kaga imanaysa hoggaamiyayaasha kale, isagoo ugu yeeray in ay yihiin 'juhalo' iyo 'xaasidiin'.
2013-05-13 Iyadoo qeyb ka ah dadaalada lagu tirtirayo cabsida al-Shabaab, ayay xukuumaddu dib usoo noolaynaysaa Bilayska Kaydka ah, oo ah unug rayid hubaysan ah oo ku dhex jiraya bulshada.
2013-05-10 Xarunta Hawlgalka Booliiska Kenya ayaa waddanka siinaysa talaabo dheeraad ah oo caabinaysa khatarta xagjirayaasha iyada oo isku duba ridaysa dadaalada hay'adaha ammaanka qaranka, mas'uuliyiinta xukuumadda ayaa sidaas leh.
2013-05-09 Axmed Cabdi Godane ayaa ku soo celiyay hadalladii lagu yiqiin balse ku guul-darreeystay in uu ka hadlo eedeynta kaga imanaysa hoggaamiyayaasha kale ee al-Shabaab ee sii kordhaya.
2013-05-07 Qaraxa ayaa dilay saddex qof, dhaawacayna in ka badan 60, iyada oo dawladdu ballan qaaday in ay 'isticmaalayso awoodda u badan' si ay ula dagaasho kuwa isku dayaya in ay waddanka ka huriyaan khilaaf diineed.
2013-05-02 Wasiirka Soomaaliya ee Arrimaha Gudaha iyo Ammaanka Qaranka ayaa dhowaan abaabuli doona unug booliis ah oo ka kooban 1,300 oo xubin oo waardiyayn doona caasimadda waddanka iyaga oo wata gawaadhi iyo helikobtaro calaamadaysan.
2013-04-30 Khilaaf sii kordhaya ayaa waxaa daaha ka rogay war baahinta bulshada iyadoo hoggaamiyaha ugu sareeya al-Shabaab laga dhalleeceeyay dhan walba xilli uu daafaha Soomaaliya ka ugaaranayo kuwa ay is hayaan.
Waraaq furan oo loo diray madaxa al-Shabaab ayaa caddaynaysa: 'Haa, dhibaatooyin ayaa jira'
2013-04-30 Waraaqda oo ku socota Axmed Cabdi Godane kana socota mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya dagaalyahaniinta ajnabiga ah ayaa ku tusaysa kalsooni la'aanta sii xumaanaysa iyo kala go'a xidhiidhka xubnaha.
Sharicga Soomaaliya ee argagixisada ka dhanka ah oo beegsanaya al-Shabaab
2013-04-26 Sharcigan la soo bandhigay ayaa ah tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhinaca la-dagaalanka argagixisada, iyada oo xukuumaddu sii waddo in ay si buuxda ula wareego Muqdisho iyo dhammaan wadanka, sida ay leeyihiin wasiirro ka tirsan xukuumadda.
Sonkorta Soomaaliya laga soo dhoofiyo ayaa maalgalinaysa al-Shabaab, madaxda Kenya ayaa sidaas leh
2013-04-24 Dagaal yahaniinta al-Shabaab oo iska dhigaya ganacsato caadi ah ayaa hubka si kontrabaan ah ku soo galiya Kenya iyaga oo adeegsanaya kiishashka sonkorta, baadhitaan ay dawladdu samaysay ayaa sidaas caddeeyay.
Cutubka ka hortagga argaggixisada oo Muqdisho ka hawl galaya
2013-04-18 Dowladda Soomaaliya ayaa diraysa cutub khaas ah oo ka kooban 1,000 sarkaal oo ka tirsan milatariga, bilayska iyo qeybaha kale ee ammaanka qaranka si loo burburiyo unugyada al-Shabaab ee casimadda ku sugan.
2013-04-15 Weerarka ay al-Shabaab ka fuliyeen Muqdisho waxaa ku dhintay dad u badan shacab waana isku day dadka looga jeedinayo dhibaatooyinka kooxda ka haysta dhinaca hoggaanka oo ku soo shaac baxay waraaq uu dhowaan qoray guddoomiye ku-xigeenkooda.
Soomaalida oo dhaleecaysay duullaankii al-Shabaab ee maxkamada
2013-04-15 Shacabka reer Muqdisho ayaa muujiyay sida ay uga xunyihiin dadkii sida macna'laanta ah ugu dhintay gacanta al-Shabaabta la wiiqay ee naflacaariga ah.
Waraaq furan oo ku socota al-Zawahiri oo gilgishay aasaaska al-Shabaab
2013-04-12 Taliye ku-xigeenka al-Shabaab, Ibrahim al-Afghani, ayaa waraaq 15-baal ah u qoray hoggaamiyaha al-Qaacida Ayman al-Zawahiri, isagoo ku eedeeyay Axmed Cabdi Godane amar ku-taagleyn.
'Dukumentiyada qarsoodiga ah' ee al-Shabaab waa xeelad dacaayad oo raqiis ah
2013-04-09 Kooxda xagjirka ah waxay sheegteen inay dukumentiyo sir ah ka qaateen xafiiska madaxweynaha Soomaaliya, balse wali ma aysan shaacin wax daliil ah.
2013-03-22 Ka dib markay kooxda maleeshiyada ah dib u qabsadeen Xudur oo ay durbadiiba xukunkoodii argaggixisada ahaa ku maamuleen, ayay Midowga Afrika iyo xukuumadda Soomaaliya ballan-qaadeen inay ammaan ku soo celin doonaan magaalada.
2013-03-19 Dadaalada al-Shabaab ee hagardaaminta horumarka iyo nabadda Soomaaliya ma guulaysan doono, sida ay sheegayaan madax ka tirsan Soomaaliya iyo Midowga Afrika.
Mareegtii ugu dambeeysay ee al-Shabaab oo shaaca ka qaaday tabardarro
2013-03-15 Ka dib markii al-Shabaab ay lumiyeen dhul badan oo Soomaliya ka mid ah waxa ay warbaahintoodu wadeen isku day ah in ay muujiyaan midnimo iyo isku xirnaansho, sida ay sheegayaan dadka wax falanqeeya.
Soomaalida oo dhalleeceeyay xarigga ay al-Shabaab ee macalimiinta Qur'aanka
2013-03-11 Dadka daggan gobolka Hiiraan ayaa diiday dadaalada al-Shabaab ay ku doonayaan in ay macalimiinta Qur'aanka xoog ugu askareeyaan caruurta si ay iyaga ugu biiraan.
Fiidiyowga 'Waayaha Mujaahidiinta' oo muujinaya dagaalyahannada al-Shabaab oo yasan isla daallan
2013-03-07 Fiidiyowga 20-ka daqiiqadood ah waa iskudaygii ugu dambeeyay ee al-Shabaab ay ku doonayaan inay ku soo qortaan dagaalyahaniin ajnabi ah oo buuxiya safafkooda dhamaaday oo dagaalka ku daalay.
Al-Shabaab kama 'sii jeesan karaan runta' inta taxanaha al-Amriiki uu socdo
2013-02-25 Ololaha socda ee ka dhanka ah Abuu Mansuur al-Amriiki ayaa xaqiijiyay in kala qaybsanaanta al-Shabaab iyo dagaalyahaniinta ajnabiga ah ay tahay mid dhab ah, iyo in dagaalyahannada kooxda uu samirkii ka dhamaaday.
2013-02-19 Sheekha ayaa maalmihiisi ugu dambeeyay ku eedeyn jiray al-Shabaab dilka Muslimiinta, weeraridda hoggaamiyayaasha diinta iyo kudhaqanka diinta la taxriifiyay ee Islaamka.
2013-02-15 Al-Shabaab ayaa sheeganaysa in ay dishay askari kadib markii aysan dawladda kenya ka helin wixii ay rabeen, iyada oo nolosha la haystayaasha kalana wakhti u qabaty.
Al-Shabaab oo ka been sheegaysa qabashada la haystayaal Keenyaan ah
2013-01-29 Kooxdan dagaal yahaniinta ah ayaa sheegaysa in labada la haystayaalka ah ay ahaayeen dagaal yahaniin goobta dagaalka lagu qabtay, laakiin sida ay xaqiiqadu tahay, waxay yihiin shaqaale shibil ah oo la afduubay xilligii ay al-Shabaab tuulada weerartay.
Duqayda Ceel Buur oo lagu khasbay in ay bixiyaan mag-dhawga dilalka al-Shabaab
2013-01-28 Ka dib markii dagaal yahaniinta al-Shabaab ay dileen labo dhalin yaro ah oo kubad ku ciyaarayay Ceel Buur, ayaa kooxdan mitidka ah ku amartay duqayda qabaailka in ay bixiyaan 200 oo geel ah ayna mag-dhaw ahaan u siiyaan qoysaskii dadka laga dilay.
2013-01-22 Farriin dhamaadkii sanadka ah oo lagu sheegayo sanadkii 'horumarka' ee MYC, ayay kooxda al-Shabaab la ologga ah waxay ku sheegteen mas'uuliyadda weeraro argaggixiso ah oo ay kooxo kale qaadeen.
2013-01-17 Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa shaaca looga qaaday In al-Shabaab ay xiriir la samaysteen koox fallaago reer Ugandha ah oo la yiraahdo Allied Democratic Forces taa oo ay ku doonayaan in ay howlgalladooda ku baahiyaan gobolka.
Al-Amriki oo sheegay in howlkarnimo la'aanta al-Shabaab ay sabab u tahay kalsooni-darrada ay ka qabaan ajaanibta
2013-01-15 Waxa fashilmay dadaalada ay al-Shabaab ku doonaysay in ay isugu muujiso mid midaysan si ay u saxdo kala qeybsanaanta kadhex jirta xubnaheeda, iyadoo Omar Hammami iyo kooxdiisa ay muujinayaan qanaaca-darro isa soo taraysa.
Tuulo Soomaali ah oo argagaxsan kaddib markii al-Shabaab ay xabad ku fureen xaflad aroos ah
2013-01-10 In kasta oo ay u hoggaansanaayeen sharciyada al-Shabaab ee xafladaha arooska, ayaa xabadayntu waxay maalintii farxadeed u rogtay maalin murugo.
Cuna-qabataynta al-Shabaab ee Xudur oo shacabka u gaysanaysa ciqaab
2013-01-09 Markii ay Xudur gacantoodii ka bixiyeen ciidamada huwanta ah, ayaa al-Shabaab cuna qabatayn ku soo rogtay magaalada meelaha laga galo, cabsina galisay ganacsatada isku dayaya in ay cuntada iyo alaabada kale geeyaan.
2013-01-03 Codsiyada is daba jooga ee kooxdan dagaal yahaniinta ah ay ku codsanayaan tabarucaad ayaa cadayn u ah dhibaatooyin adag ee dhinaca maaliyadda ah.
Wajiyada badan ee al-Shabaab ku joogto Kenya
2012-12-28 Fikradda ah in dhammaan xubnaha al-Shabaab ay kasoo jeedaan bulshada Soomaaliya ayaa sababi karta in Keenyaanka ka ilduufeen argagixisada ku dhex nool.
Al-Shabaab oo isku urursanaya Buulo Burde kahor dagaal weyn oo ku soo wajahan
2012-12-27 Kooxda xag-jirka ah ayaa afduubaya caruurta, kuna khasbaya in ay hubka qaataan si ay ula dagaallamaan ciidamada soo socda ee isugu jira Soomaalida iyo isbahaysiga, sida ay sheegayaan dadka daggan Buulo Burde.
Dhiibaatada haysata al-Shabaab oo sii fogaatay kadib markii ay dayriyeen al-Amriki
2012-12-20 Dayrada sare ah ee jihaadiga u dhashay Mareykanka ayaa sii ballaarin doonta khilaafka ka dhextaagan hoggaamiyayaasha maxaliga ah ee al-Shabaab iyo dagaalyahanada shisheeye ee weli ka howl gala Soomaaliya.
Abaal-gudka lacageed ee ka imanaya al-Shabaabta dhaqaalo la'aanta la taahaysa waa hagardaamo maran
2012-12-19 Isku day quus ah oo wajiga lagu dadanayo, ayay al-Shabaab ku yaboohday abaal-gud lacageed oo faro badan si dhalinyarada shaqo la'aanta ah ay ugu qurxiso in ay dilaan saraakiisha ammaanka Kenya.
Mustaqbal burbur soo food-daaray xaasaska maxaabiista lagu tuhunsan yahay al-Shabaab
2012-12-18 Haween jooga xabsi ku yaala duleedka Muqdisho ayaa sheegaya in kooxda maleeshiyada ah ay marin-habaabiyeen raggoodii iyo wiilashooda, qoysaskoodana badeen xaalad faqri ah.
2012-12-17 Kadib guuldarrooyin isdaba joog ahaa oo sanadkan dhacay, ayaa Axmed Cabdi Godane ayaa sheegay in kooxda ay u badalayso hanaan dagaaleedkeeda qaab dhuumaalaysi ah.
Iyaga oo dareemaya kala furfurasho dheeraad ah, ayay al-Shabaab isku dayaysaa inay disho hoggaamiyaha Xisbul Islaam
2012-12-10 Saaxiibkii hore ee al-Shabaab Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa ka badbaaday illaa shan isku day oo dil qarsoon ah labadii usbuuc ee la soo dhaafay, kaddib markii uu sheegay in uu doonayo in uu wada hadalo la galo dawladda Soomaaliya.
isku dayga al-Shabaab ee ah in ay dagaalyahaniin shisheeye soo qortaan oo Soomaalida ka fogeeyay
2012-12-07 Kooxda mitidiinta ah in ay ahmiyad siinayaan in ay soo shaqaaleeystaan dagaalyahaniin qalaad waxay daliil u tahay saameeynta sii yaraaneeysa oo ay Soomaalida ku dhex leeyihiin, masuuliyiinta ammaanka iyo falanqeeyeyaasha ayaa sidaas leh.
Ciidamada Galmudug iyo kuwa Puntland oo baacsanaya xubnaha baxsadka ah ee al-Shabaab
2012-12-05 Markii ay guul darro kasoo wajahday koonfurta Soomaaliya, al-Shabaab waxa ay isku dayayaan in ay gabbaad ka helaan qeybaha waqooyi ee dalka, saraakiisha ayaa sidaas leh.
2012-11-12 Hoggaamiyeyaasha Soomaalida ayaa leh dalka wuu ka gudbay colaadihii al-Shabaab, iyagoo ka soo qaaday baaqii dagaal ee hoggaamiyaha al-Qaacidda Ayman al-Zawahiri mid aan macna lahayn.
Tiiraanyada dhaqaale ayaa dhiirri-gelinaysa asal-raacnimada Tansaaniya
2012-11-06 Iyada oo uu jiro gabbaad diimeed, mudaaharaadyada iyo dibadbaxyada waxay aad ula xariiraan dhibaatada dhaqaale marka loo eego dulqaad la'aanta kala duwanaanshaha caqiidooyinka diimeed, falaanqeeyeyaasha ayaa sidaas leh.
2012-10-31 Hanjabaadii ugu dambaysay ee al-Shabaab ee ka dhanka ahayd dawladaha dariska Soomaaliya la ah iyo waddamada reer galbeedka ah ayaa ah isku day tabar yar oo niyada loogu dhisayo dagaalyahaniinta niyad jabsan iyo inay helaan taageerada jihaad-wadayasha caalamiga ah, falanqeeyayaasha ayaa sidaas leh.
2012-10-30 Dalabka jihaadiyiinta shisheeye ee faragalinta waa calaamad muujinaysa kala qaybsanaanta qotada dheer ee ka dhaxaysa hoggaamiyeyaasha al-Shabaab, sida leeyihiin falaanqeeyeyaasha.
Bilayska Laas Caanood oo waxyaabaha qarxa ka helay dugsi Quraan
2012-10-26 Mas'uuliyiinta Somaliland ayaa sheegay in maamulku uu aad uga feejiganyahay in xubno al-Shabaab ka tirsan aysan aagga soo dhex galin.
Intay al-Qaacida sii dhacayso, waxaa soo baxaya Ansaar al-Shareeca
2012-10-05 Kooxaha Salafiyiinta ee dalka Mali, Yemen illaa Soomaaliya ayaa isugu-tagaya, wax uu falaanqeeye leeyahay waa wajiga cusub ee caqiidada al-Qaacida.
Booliiska oo waxyaabaha qarxa ku qabtay qabuur Wajeer ku taala.
2012-10-05 Shacabka ayaa u sheegay maamulka dhaqdhaqaaqyo ay ka shakiyeen oo ka socday qabuuraha, taas oo joojisay weerar aad khatar ahaan lahaa oo magaalada ka dhaca.
Shaqo la'aanta oo dhalinyarada Soomaaliyeed ka dhigaysa kuwo hijroonaya kuna biiraya kooxaha xag jirka ah
2012-10-03 Dawladda ayaa u baahan in ay wax ka qabato xaqiiqada ah in Soomaalida inteeda badan ay yihiin shaqo la'aan, taas oo qaar ku khasbaysa in ay hijroodaan ama ay ku biiraan kooxaha xag jirka ah, falaqeeyayaasha ayaa sidaas leh.
Haweenka Soomaalida oo higsanaya mustaqbal wanaagsan kadib sano badan oo dhibaato ah
2012-10-01 Haweenka ayaa dhibaatooyin badan xambaaray xiligii dagaalada mana aha in la gacan bidixeeyo iyada oo ay Soomaaliya dib u dhismayso, dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda ayaa sidaas leh.
2012-09-30 Kadib sannado ay gacanta ku haysay magaalada istraatiijiga ah ee dekedda leh, kooxda ku xiran al-Qaacida waxa ay ku jabtay dagaal ay isaga horyimaadeen ciidamada huwanta.
Soomaalida oo eegaya mustaqbal ka maran fikradda gaalaysiinta ee al-Shabaab
2012-09-28 Fikradda gaalaysiinta, oo ah fikrad dibadda kaga timid Soomalida, ayaa shaciyaynaysa weerrarada ismiidaaminta ah, iyadoo dadka Muslimiinta ahna ka dhigaysa kuwa diinta ka baxay.
2012-09-27 Cadaadis militari oo ka imanaya ciidamada xoogga Soomaaliya iyo Midowga Afrika iyo ka goosasho fara badan ayaa wiiqay al-Shabaab kuna sameeyay tafaraaruq kooxda mitidka ah dhexdooda, siday leeyihiin falanqeeyayaashu.
2012-09-25 In kabadan 200 oo dagaalyahanada al-Shabaab ah ayaa si iskood ah isugu so dhiibay Ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya jooga -- waa soo baxsashadii ugu waynayd ee dhanka maleeshiyada ah hal maalin gudaheed.
Laba qarax oo ismiidaamin ah oo makhaayad Muqdisho ku taala ku dilay 14 qof
2012-09-21 Hay'adda u dooda xuquuqda saxaafadda ee Wariyayaasha aan Xudduudda Laheyn ayaa sanadka 2012-ka ugu yeertay sanadkii ugu dhiig daadashada badnaa ee saxafiyiinta Soomaaliya.
2012-09-14 Saamaynta uu lahaa Aboud Rogo Mohamed ayaa ka soocday xagjiriinta kale, sida ay u badan tahayna ma muuqdo qof badali kara, sida ay qabaan falanqeeyayaashu.
Kaymaha Jubada Hoose oo al- Shabaab u noqotay gabaad
2012-09-11 Dagaalyahaniinta al-Shabaab oo ku taxay kaymaha "Badda Madaw" miinooyin, iyaga oo isku dayaya in ay ka dhigtaan meel gabadaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Al-Shabaab oo caruurta geeyay furimaha dagaalka Jowhar kahor
2012-09-06 Dadka deegaanka iyo dha dhaqdhaqaaqayaal xuquuqda aadanaha ah ayaa sheegayaa in al-Shabaab ay ku qasbayaan caruurta in ay maleeshiyada u dagaalamaan, iyagoo wada dadaalkoodii ugu dambeeyay ee ay ku difaacanayaan meelaha ay ku xooganyihin.
Al-Shabaab oo karaamo tiraya maydad iyada oo ciidamada huwantu ay ku soo dhawaanayaan Kismaayo
2012-09-04 Shacaabka Kismaayo oo xanaaq daran u muujiyay al-Shabaab kuwaas oo ku jiiday maydad lagu tuhun san yahay in ay yihiin Soomaali iyo kuwo Kiinyaan ah magaalada badhtamaheeda Sabtidii iyo Axaddii la soo dhaafay.
Al-Shabaab oo isku dayaysa in ay wiiqdo qorshooyinka Keenya ee Soomaaliya iyaga oo adeegsanaya cabsi galin
2012-08-28 Kooxdan al-Qaacidda la bahowday ayaa isku dayaysa in ay ku khasabto dawladda Keenya in ay ka baxdo Soomaaliya, iyada oo abuuraysa cabsi galin dhinaca dadwaynaha ah, in dheer garadka ayaa sidaas leh
Kala qybsanaan ayaa wiiqday al-Shabaab iyadoo ciidamada Soomaaliya ay ku dhow yihiin Kismaayo
2012-08-28 Al-Shabaab ayaa la taahaya khilaafaad dhexdooda ah, iyadoo dhinacyadu ay isku garbinayaan awoodda, maleeshiyadanu ay ka baxsanayaan kooxda.
Muslim Youth Centre oo wacad ku martay dagaal ay kaga jawaabayso dilka hoggaamiyaheeda Rogo
2012-08-27 Aboud Rogo Maxamed ayaa la dilay Isniintii, taasoo dhalisay hanjabaad dagaal ah oo kasoo yeertay jaalayaasha al-Shabaab ee Kenya.
2012-08-27 Madaxda Al-Shabaab ayaa u soo guuray Baraawe markii kooxdani ay jabab isdaba joog ah ay sanadan ku dhacday, taas oo magaaladan xeebta ah ka dhigaysa fadhiisimooyinkoodii ugu danbeeyay.
Al-Shabaab oo lacag xoog kaga qaadaya Soomaalida iyaga oo ku andacoonaya in ay tahay zako
2012-08-24 Kooxdan al-Qaacidda la bahowday oo u isticmaalaysa lacagta ay ururiso si ay ugu maalgaliso ololaheeda milarati intii ay u isticmaali lahayd in dadka baahan ay ku kaalmayso
Ujeedada Muslim Youth Centre waa in ay fitno diineed ka abuuraan Kenya siday leeyihiin falanqeeyayaasha
2012-08-22 Kooxda al-Shabaab la ollogga ah waxa ay doonayaan in ay abuuraan xaalad fowdo ah kadib markii ay ku guul darreysteen in dadka Kenya ay ka dhaadhiciyaan in dagaalka lagala hor jeedo al-Shabaab uu yahay mid diimeed, sida ay saraakiishu sheegeen.
2012-08-22 Ganacsatada xidhiidhka la leh kooxdan ayaa adeegsanaya khuraafaadka sixirka madaw si ay dadka ugu qanciyaan in ay cunaan hilibkan diin ahaan loo mamanuucay.
2012-08-16 Xildhibaano Soomaali ah ayaa qaba in ay adagtahay in la dhaqan-galiyo xayiraadda dhoofinta dhuxusha ilaa al-Shabaab laga saaro dekedaha Soomaaliya.
2012-08-07 Iyadoo ciidamada Soomaaliya iyo kuwa huwantu ay kusii siqayaan magaalada Kismaayo, oo ah magaaladi ugu dambaysay ee ay ku xoogganyihiin, kooxda xagjirka ahi waxa ay isku dayaysaa in ay boorka ka jafto dagaalyahanadooda niyad jabsan, falanqeeyayaasha ayaa sidaa leh.
2012-07-30 Toogashada ayaa ka dhigan kala qaybsanaanta kooxda oo sii xoogaysanaysa iyo kalsooni darro ka dhex jirta, falanqeeyayaasha ayaa sidaa leh.
2012-07-23 Kismaayo waa meelaha fadhiisimaha xoogga ay ku leedahay al- Shabaab, qabsashadeeduna waxay ka dhigan tahay "dharbaaxo culus" oo kooxdan soo gaadha.
Laba weerar oo loo adeegsaday bam-gacmeedyo oo 4 qof ku dhaawacay Wajeer
2012-07-19 Kenya ayaa la taahaysay weerarro kala duwan oo loo adeegasanayo bam-gacmeedyada tan iyo markii ay ciidamadeeda u dirtay Soomaaliya si ay ula dagaallamaan al-Shabaab.
Gaari ay qarxiyeen al-Shabaab oo xildhibaan ku dilay Muqdisho
2012-07-16 Maxamuud Cabdi Ibraahim ayaa ku dhintay, lix kalana waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax baabuur, oo sida ay u badan tahay lagu rakibay kursiga wadaha lagu qarixiyay magaalada Muqdisho Isniintii (16-kii Juulaay)
2012-07-10 Weerarada ka dhanka ah saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa sii kordhaya iyadoo kooxaha wacyi-galinta ay dowladda ugu yeerayaan in ay si buuxda u baarto jariimooyinka.
2012-07-09 Si ay uga jawaabaan fasirka qaldan ee kooxda xagg-jirka ah ee al-Shabaab ay ka bixiyeen diinta Islaamka, ayay hoggaamiyayaasha diinta ee Wajeer waxa ay la shaqaynayaan saraakiisha ammaanka iyo gudiga nabadda.
2012-07-03 Al-Shabaab ayaa bilaabay in ay dhibaateeyaan qabaa'ilka maxaliga ah, islamarkaana ay dhacaan xoolaha nool si ay u maal-galiyaan howlahooda militari.
Kenya oo al-Shabaab ku eedaysay weerarradii kaniisadaha, kuna dhaaratay in ay kor u qaadayso ammaanka
2012-07-02 Hoggaamiyayaasha diinta ayaa leh dhammaan goobaha lagu cibaadaysto waa in la ixtiraamaa, iyaga oo bulshadana ku dhiiri-galiyay in ay dhallinyarada ka illaaliyaan in ay galaan argagixisada.
2012-06-28 Ururka Argagixisada oo meelihii ay lacagtu ka soo galaysay sii yaraanayso iyo iyada oo wali ku sii socoto dib u dhac xaga militariga ah ayaa waxay ku qancisay dhalinyaro badan oo Kenyaan ah in ay ururkaas isaga tagaan.
Hoggaamiye ka tirsan al-Shabaab oo codsaday kaalmo iyada oo ay ciidamada ammaanku horay u sii socdaan
2012-06-26 Iyada oo kooxda xiriirka la leh al-Qaacida laga sii riixayo magaalooyin ku yaalla gobollada Shabeellaha Dhexe iyo kan Hoose, ayaa waxa si muuqata bannaanka ugu soo baxay cadaadiska dhaqaale ee kooxda haysta.
Dhaq-dhaqaaqayaal Soomaaliyeed oo dhaleeceeyay fariin ku baaqaysa “jacayl shahiidnimo ” oo ka timi xaaska al-Zawaahiri
2012-06-25 Fariinta ka timi xaaska hogaamiyaha al-Qaeda, ma ahan mid ka turjumaysa qiimaha uu Islaamku leeyahay, waana isku day lagu doonayo in lagu sumeeyo maskaxda dadka, dhaq-dhaqaaqayaal Soomaaliyeed ayaa sidaa leh.
2012-06-20 Axmed Cabdi Godane waxa uu sheegay in dhaq-dhaqaaqa (al-Shabaab) kaabiga ku hayso guul, balse dadka falanqeeya ammaanka ayaa leh tani kaliya waxa ay ka dhigan tahay isku day uu kor ugu qaadayo niyadda dagaalyahanada al-Shabaab.
2012-06-19 Taliy ka tirsan al-Shabaab ayaa u sheegay Sabahi in daraasiin ka tirsan dagaalyahannada al-Shabaab ay dhawaan u carareen Yemen iyada oo xoogagga Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ay sii wadaan in ay qabsadaan dhualal hor leh.
2012-06-11 Saraakiisha Soomaalida ayaa sheegaya in lacagaha la yaboohay ay yihiin dariiq waxtar ah oo lagu soo qaban karo hoggaamiyeyaasha al-Shabaab oo aanay garab-gal u tahay barnaamijka lacageed ee ay DFKMG ahi horay ugu yaboohday.
2012-06-07 Cilmi-baare ayaa sheegay in aragtida al-Qaacida ay xubneheedu ku hanuuniso ay tahay in ay rabshado kala hortaagaan jiha kasta oo ka hortimaadda ururka.
2012-06-04 Kala duwanaansho dhinaca mabaadi'ida ah ayaa ragaadiyay al-Shabaab ka dib guul-darooyinkii ay dhawaan la kulantay, iyadoo hoggaamiyayaasheedu ay qabanayaan kulamo gooni gooni ah oo ay kaga arinsanayaan mustaqbalka kooxda.
2012-05-22 Cali Maxamed Xuseen ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu dhaleeceeyo al-Shabaab, arrintaasi oo ay falanqeeyayaashu ku sheegayaan in ay tahay tallaabo aan horey loo arag oo muujinaysa in kala tag dheeraad ah oo kooxda dhexdeeda ahi uu soo socdo.
2012-05-17 Saraakiisha amniga Kenya ayaa ku jira heegan sare ka dib markii weerar bambaano oo maqaayad Mombaasa ku taalla lala beegsaday sidoo kalena miino dhulka lagu aasay ay ka qaraxday dhisme ku yaalla Dhadhaab
2012-05-16 Afhayeenka al-Qaacida ayaa waraaq ku qoray in ay haboon tahay in ay al-Qaacida iska fogayso xulufadeeda joogta Ciraaq iyo Dhaalibaanta Pakistaan.
2012-05-14 Dadka wax falanqeeya ayaa leh hoggaamiyaha al-Qaacida ayaa u ku talaggalay in uu niyadda u dhiso dagaalyahannada al-Shabaab kuwaa oo la niyad-jabay guul-darrooyin millatari oo is xigxigay iyo sirtii ku fashilantay waraaqihii bin-Laden.
Dhambaalka Bin Laden ayaa muujinaya xiriir murugsan oo ka dhexeeyey al-Qaacida iyo al-Shabaab
2012-05-07 Diidmadii Bin Laden uu diidey codsigii al-Shabaab ay ku codsanayeen in ay la midoobaan ayaa sababtay kala-qaybsanaan iyo cabdi soo kala dhex-gashay hoggaamiyeyaasha kooxda, ayay leeyihiin falanqeeyayaasha.
Bin Landen oo diiday codisigii al-Shabaab ee ku biiridda furan
2012-05-06 Dhambaal uu soo diray Osama bin Laden ayaa muujinaya in uu diiday in kooxda al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaallanta ay si rasmiya ugu biirto ururkiisa, isaga oo ka baqay in ay taasi saamayso gargaarka la siinayo Soomaaliya iyo in ay dadku kala noqdaan taageerada
2012-05-04 Hoggaamiyeyaasha Soomaaliya ayaa sheegaya in weerarka lala beegsaday aanay hakin doonin dedaallada ay al-Shabaab uga cirib-tirayaan Soomaaliya.
2012-05-01 Madaxda ayaa uga digtay masuuliyiinta ku sugan goobaha ay dadwaynahu isugu yimaadaan in ay kordhiyaan ammaanka si looga hortago weerarro dheeraad ah.
2012-04-27 Muwaaddiniinta keena macluumaadka ku saabsan meelaha ay joogaan xoogagga al-Shabaab waxay heli karaan lacag abaal-marin ah oo gaaraysa ilaa $500 oo doollar haddii xogtaasi ay horseeddo in lasoo qabto ama la dilo.
2012-04-23 Muranka ka taagan halkii uu ku dambeeyay jihaadyahanka ajnabiga ah Cumar Xammaami ayaa dhibaatooyin badan gayaysiiyay kooxda, sida ay sheegayaan dadka wax falanqeeya.
2012-04-16 Falanqeeyayaashu waxa ay sheegayaan in al-Shabaab si ba’an loo wiiqay xubnaheeduna ay dib ugu gurteen Buuraha Golis ee dhagaxlayda ah si ay dib isugu soo urursadaan.
Dalka Yaman, qoys uu ka dhashay qof naftiisa qarxiyey oo ay hagarjuumid iyo dhibaato soo foodsaartay
2012-04-16 Iyadoo sannad-guuradii ka soo wareegtay dhimasada wiilkiisu ay ku soo fool leedahay, ayaa aabe Othman Ali Noman al-Selwi uu ka hadlay cawaaqib xumada ka dhalatay sida sharaf-xumadaha ah ee nolosha wiilkiisu ku soo geba-gabowday.
2012-04-11 Weerarka ka dhanka ah dumarka iyo caruurtu waa astaan itaal-daro muujinaysa, ayay sheegeen masuuliyiinta, waxayna muujinaysaa in al-Shabaab dhawaan laga guulaysan doono.
2012-04-06 Hoggaamiyaal iyo falanqeeyayaal Soomaali ah ayaa ku tilmaamay weerarkii is-miidaamiska ahaa ee Arbacadii lala beegsaday wasiirradii ku sugnaa Masraxa Qaranka ee Muqdisho mid fulaynimo ah isla markaana uu muujiyay sida ay u wiiqintay al-Shabaab.
2012-04-05 Xubin miisaan ku dhex leh al-Shabaab ayaa si cad u dhalleeceeyay hogaamiyaha kooxda, taasoo ah calaamad muujinaysa khilaaf sii ballaaranaya oo kooxda ka dhex taagan.
Al-Shabaab oo dilal aan sharciga waafaqsanayn ku fulinaysa muwaaddiniinta Soomaaliyeed
2012-04-04 Dhaq-dhaqaaqayaasha xuquuqul-insaanka iyo culumaa’udiinka ayaa sheegaya in tallaaboyinka al-Shabaab ay jabinayaan qawaaniinta caalamiga ah isla markaana aysan wax raad ah ku lahayn Islaamka.
2012-03-30 Muranka gudaha ee u dhexeeya al-Shabaab iyo amniga gobolka oo la adkeeyay ayaa qayb ka qaatay hoos u dhicidda weerarrada argaggixiso ee ka dhaca Waqooyi Bari Kenya, sida ay leeyihiin saraakiisha iyo dadka wax gorfeeya.
2012-03-29 Sida uu sheegay afhayeen u hadlay DFKMG ah, in ka badan 500 oo ah dhallinyaro ka tirsanayd al-Shabaab ayaa isu soo dhiibay xukuumadda tan iyo intii uu biloowday barnaamijka cafiska ah.
2012-03-26 Dadka wax falanqeeya ayaa u doodaya, in mushkilad ka jirtay dhinaca kalsoonida oo ay uga sii dartay isfaham darro ka dhex jirta xubnaha ajaanibta ah iyo kuwa Soomaalida ah ee al-Shabaab laga yaabaa in ay isugu biyo-shubato dhammaadka kooxda ku xiran al-Qaacida.
2012-03-20 Dadka gorfeeya arimaha ammaanka ayaa sheegay in isticmaalka ay al-Shabaab warbaahinta dadwaynaha u isticmaasho luqada Af-Ingiriisku uu yahay isku day ay isku dayayso inay faafiso dacaayad sidoo kalena ku soo jiidato dadka aan Soomaalida ah ee ay qoranayaan.
2012-03-19 Mas'uuliyiinta qaabilsan hawlaha ammaanka ayaa sheegay inay kordhiyeen tallaabooyinka ammaanka lagu sugayo iyadoo ay socdaan baaritaanno lagu ogaanayo sida uu qofka naftiisa qarxiyay uu ilaa xadkaa ugu soo dhawaaday xarunta madaxtooyada
2012-03-14 Saraakiishu waxay ku doodayaan in ku biiritaankii ay dagaal-yahaniinta Galgala ku biireen al-Shabaab uu ka dhigan yahay tab istraatijiyadeed oo ay ku doonayaan in ay ku helaan taageerada ay u baahan yihiin, waxayna muujinaysaa in kooxdu wiiqantay.
Bilayska oo xiray 4 qof oo lala xiriiriyay qaraxii baska ee ka dhacay Nairobi
2012-03-12 Bilayska ayaa sheegay inuu socdo baaritaan la hayo iyadoo afar qof oo qaraxa looga shakiyayna su’aalo la waydiinayo kuwaasi oo lala xiriiriyay qaraxii baska ee ka dhacay boosteejada Machakos.
2012-03-02 Shaqaalihii ay wada shaqaynayeen Abuukar Hassan Kadaf ayaa sheegay inay qorshaha ugu jirtay in uu dib u shaqo galiyo raadiyii Somaliweyn ka dib markii ay al-Shabaab weerartay oo ay biliqaysatay xaruntii idaacadda sannadkii 2010-kii.
2012-02-29 Bilayska Soomaaliya ayaa furfuray qalab qarxa tartanka ciyaarta ka hor, laakiin waxaa qarxay bambaano kale oo dishay ugu yaraan shan daawade oo dhallinyaro ah.
2012-02-13 Isku-biiriddu waa isku day al-Qaacida iyo al-Shabaab niyaddooda kor loogu qaadayo, kuwaasi oo ay bilihii la soo dhaafay ay lasoo darseen dib-u-dhac wayni, sida ay sheegeen dadka u dhuun-daloola hawlaha ammaanka.
2012-02-10 Masuuliyiin Soomaaliyeed ayaa sheegay in weerarka al-Shabaab ee dadka shacabka ah lagula kacay iyo ku biiridooda urrurka al-Qaacida ay ka dhigan tahay in labadan kooxood yihiin labada dhinac ee lacagta birta ah.
2012-01-11 Qaar ka mid ah falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in dedaallada ciidan ee dawladda Soomaaliya iyo xulafadeedu ay al-Shabaab ka daciifiyeen dhinacyada milliteriga iyo dhaqaalahaba
2012-01-06 Midowga Afrika ayaa sheegaya in ciidamada midaysan ay haatan ka takhallusi karaan al-Shabaab.